Toca Chitoro, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Sezvo chidiki cheimba chinokura, kuravira kwavo kwekushandisa kunoshanduka uye ivo vanoda mamwe maitiro akaomarara kana mitambo Vakomana veToca Boca vanotipa huwandu hukuru hwekunyorera kudiki kweimba iri muApp Store kuvhara chero varaidzo inoda vana vedu vangave. Nhasi tiri kutaura nezve iyo Toca Chitoro kunyorera, slab application chidiki cheimba chinoshandura yedu iPhone, iPad kana iPod kubata muchitoro. Toca Chitoro chine mutengo wenguva dzose muApp Store ye 2,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda mahara.
Toca Chitoro chishandiso icho vana vanoverengeka vanogona kutamba panguva imwe chete kana mumwe chete, anozotamba ese ari maviri mabasa: iya yemutengesi nemutengi. Kutenda kuToca Chitoro, iwo madiki ivo vachatanga kutora sarudzo, kuverenga mari, kudzidza izvo zvinhu zvinodhura uye kukosha kwazvo ... Nekuda kwemutambo uyu, vana vedu vachatanga kujairana nehutariri zviwanikwa, hunyanzvi hwemasvomhu, kutaurirana, kubatana pamwe chete, kuchinjana
Toca Chitoro Zvimiro
MuToca Store tine zvigadzirwa zvinopfuura makumi matatu zvekutengesa nekutenga.
Mutengo wechigadzirwa chimwe nechimwe unogona kuchinjwa kuti uwirirane nezvazviri kuitira kuti zvidiki zvitange kudzidza kukosha kwezvinhu.
Koka shamwari dzevana vedu kuti vatangewo kujairana nenyika yekutenga.
Pasina chero mhando yekushambadzira kana ye-mukati yekutenga.
Yakagadzirirwa vana kusvika pamakore mashanu.
Pasina mitemo kana gwara, vana vanotamba nenzira yavanoda vasina kumanikidzwa kubva mumutambo.
Toca Chitoro inoenderana neIOS 6.0 kana gare gare. Inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch uye ine Avhareji chiyero chenyeredzi ina kubva pa4 inogoneka.
Bata Chitoro4,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Toca Chitoro, yemahara kwenguva shoma